Surf, isingaregi browser kune avo vanongoda kusevha | Linux Vakapindwa muropa
Surf, isingaregi browser kune avo vanongoda kusevha
Kune akawanda mapurogiramu anoshandisa mashoma zviwanikwa mukati meGnu / Linux uye zvinoreva kuti tinogona kuita zvakajairika mashandiro mukati memakomputa aine mashoma kana ekare zviwanikwa. Mune ino kesi isu tichaenda kutaura nezveSurf, isingaremi, yakajeka webhusaiti. Uku ndiko kureruka kwayo zvekuti haina kero bar.
Surf ndeye webhu bhurawuza inovavarira kune vashandisi vari kutsvaga minimalism, famba paInternet uye chete mapeji anonyanya kushanyirwa kana kushanyirwa zuva nezuva.Iyo Surf webhu browser inovhurwa kubva kune iyo terminal uye inongovhura imwe peji rewebhu ratiri kuratidza. Kubva pano, mushandisi anogona kufamba asi chete kuburikidza nehukama hune peji rewebhu. Sezvauri kuona, Surf ndeye minimalist webhu bhurawuza asi zvakare yakanaka kune avo vanongobvunza wiki kana vanongoshandisa iyo internet sedhizaiti hombe yeruzivo.
Surf iri mukati zvinyorwa zvepamutemo zvekuparadzirwa kukuru kweGnu / Linux saka inogona kuiswa kuburikidza neiyo terminal kana kuburikidza neyakagovaniswa software maneja. Uye kushanda kwayo kuri nyore. Iwo wekuraira mutemo wakanyorwa uchiteverwa neiyo url iyo yatinoda kushanyira. Mushure mekutsikirira kupinda, hwindo rine peji rewebhu rinozovhura.
Kana tichida famba uchidzokera kumashure, ipapo tinofanirwa kudzvanya makiyi Ctrl + H; kana tichida fambira mberi munhoroondo, saka isu tinofanirwa kudzvanya Ctrl + R uye kana tichida zorodza peji rewebhu ipapo tinofanirwa kudzvanya makiyi Ctrl + L.
Surf inotsigirawo mawedzera-ons senge ad blocker kana maneja wekurodha pasi, asi kuti uve nayo unofanirwa kuenda iyo yepamutemo webhusaiti, dhawunirodha iyo plugin uye nyora iyo pachedu. Izvo hazvina kunyanya kuoma asi icho chiyero kune avo vanoendeswa ne fashoni yezvishongedzo uye vanokanganwa kukosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Surf, isingaregi browser kune avo vanongoda kusevha
Chitima Humambo: Wedzera DLC nyowani inonzi Iyo Great Lakes
Deepin 15.7, vhezheni inovimbisa kukurumidza kupfuura Ubuntu